ကမ်ဘာကြျော စူပါမျောဒယျတှရေဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုမြား။ – SoShwe
Home/Entertainment/ကမ်ဘာကြျော စူပါမျောဒယျတှရေဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုမြား။
ကမ်ဘာကြျော စူပါမျောဒယျတှရေဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝမှုမြား။
admin December 21, 2021	Entertainment, LifeStyle Leaveacomment
ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးမျောဒယျတှဟော ကွျောငွာပိုစတာမြာရိုကျကူးခွငျး၊ ဖကျရှငျဒီဇိုငျးမြား ကွျောငွာပေးခွငျးနဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှရေဲ့ Brand Ambassador တှအေဖွဈ ရပျတညျကာ ဝငျငှမြေား ရရှိနကွေပါတယျ။ အခုဆကျလကျပွီး Soshwe ပရိသတျကွီးအတှကျ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးမျောဒယျတဈခြို့ရဲ့ ဝငျငှတှေကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Gigi ကတော့ Victoria Secret မျောဒယျတဈယောကျဖွဈပွီး သူမရဲ့ Net Worth မှာ ဒျေါလာ ၂၉ သနျးအထိ ရှိပါတယျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈကတညျးက ထိပျတနျးမျောဒယျတဈယောကျ ဖွဈလာပွီး အသကျ ၂၆ နှဈသာ ရှိသေးသူတဈယောကျအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ဝငျငှပေမဏလညျးဖွဈပါတယျ။
၂။ Karlie Kloss
Adidas ၊ Express နဲ့ Swarovski Brand တို့ရဲ့ ပငျတိုငျမျောဒယျတဈဦးဖွဈပွီး သူမရဲ့ Net Worth မှာ ဒျေါလာ သနျး ၄၀ အထိ ရှိပါတယျ။
၃။ Linda Evangelista
ကနဒေါနိုငျငံသူမျောဒယျ Linda ဟာ ၁၉၈၀ နဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှဈအတှငျးမှာ ဝငျငှေ ၂၅ သနျးအထိ ရရှိတဲ့အထိ အထငျကွီးဖို့ကောငျးလောကျအောငျ ရှာဖှနေိုငျခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၉၀ ခုနှဈ အောကျတိုဘာက ထုတျဝခေဲ့တဲ့ Vogue Magazine တှငျ Linda မှ “ စူပါမျောဒယျတှဆေိုတာ အနညျးဆုံး တဈနကေို့ ဒျေါလာ ၁၀၀၀၀ မှမရရငျ အလုပျမလုပျဘူး . . . ” ဆိုပွီး အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၄။ Chrissy Teigen
စူပါမျောဒယျလညျးဖွဈသလို အစီအစဉျတငျဆကျသူလညျးဖွဈတဲ့ Chrissy မှ သူမရဲ့ အမြိုးမြိုးသော အသကျမှေးဝမျးကွောငျးမှ ဝငျငှဒေျေါလာ ၇၅ သနျးအထိ ရရှိနပေါတယျ။
၅။ Rosie Huntington-Whiteley
အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျမှစတငျပွီးတော့ Levi ကွျောငွာကနေ သူမရဲ့ မျောဒယျဘဝကို စတငျခဲ့တဲ့ ဗွိတိနျသူ Rosie ဟာ ဝငျငှေ ဒျေါလာ သနျး ၃၀ ကြျောအထိ ရရျှိနပေါတယျ။
၆။ Doutzen Kroes
Victoria Secret ရဲ့ မျောဒယျဖွဈသူ Doutzen Kroes မှာ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး ဝငျငှအေမြားဆုံးရရှိတဲ့ မျောဒယျတှရေဲ့ နံပါတျ (၁၀) နရောမှာ ရပျတညျခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ဝငျငှမှော ဒျေါလာ ၃၅ သနျးအထိ ရှိပါတယျ။
၇။ Liu Wen
ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး ငှကွေေးအမွောကျအမွားပေးရတဲ့ အာရှမှ စူပါမျောဒယျအဖွဈ Forbes Magazine မှ သတျမှတျခဲ့ပွီး သူမရဲ့ဝငျငှမှော ဒျေါလာ ၇ သနျးအထိ ရှိပါတယျ။
၈။ Miranda Kerr
Snapchat ကို တညျထောငျသူ Evan Spiegel ကို လကျထပျထားတဲ့ Miranda Kerr ဟာ ဒျေါလာ သနျး ၅၀ အထိ ဝငျငှရှေိပါတယျ။
၉။ Alessandra Ambrosio
ဘရာဇီးအလှမယျဖွဈသူ Alessandra Ambrosio ဟာ အသကျ ၁၂ နှဈအရှယျကတညျးက မျောဒယျအဖွဈ စတငျလုပျကိုငျခဲ့ပွီး သူမရဲ့ဝငျငှမှော ဒျေါလာ သနျး ၈၀ အထိ ရှိပါတယျ။
၁၀။ Kendall Jenner
“ Keeping Up With the Kardashians ” အစီအစဉျရဲ့ စတားတဈယောကျဖွဈသူ Kendall Jenner မှာ Kardashians မိသားစုထဲတှငျ စူပါမျောဒယျတဈဦးဖွဈပွီး ဒျေါလာ ၄၅ သနျးအထိ ဝငျငှရေရှိနပေါတယျ။
၁၁။ Adriana Lima
၂၀၀၀ ခုနှဈကတညျးက Victoria Secret မျောဒယျတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျလာတဲ့ Adriana ဟာ ဒျေါလာ ၉၅ သနျးအထိ ဝငျငှရေရှိနပေါတယျ။
၁၂။ Kate Moss
Gucci ၊ Kelvin Klein ၊ Chanel နဲ့ Bvlgari တို့ရဲ့ ပငျတိုငျမျောဒယျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Kate Moss ဟာ ဝငျငှဒေျေါလာ သနျး ၇၀ ကြျော ရရှိနတေဲ့ စူပါမျောဒယျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
၁၃။ Tyra Banks
အားလုံးရဲ့ ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျခငျြပါသလား ? ? ? “ The America Next Top Model ” ကို စတငျတညျထောငျသူနဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ စူပါမျောဒယျ Tyra Banks ဟာ သူမရဲ့ အလုပျအကိုငျအမြိုးမြိုးကနေ ဝငျငှဒေျေါလာ သနျး ၉၀ ကြျော ရရှိနပေါတယျ။
၁၄။ Heidi Klum
“ American Got Talent ” အစီအစဉျရဲ့ စီစဉျတငျဆကျသူလညျးဖွဈသလို စူပါမျောဒယျတဈဦးလညျးဖွဈတဲ့ Heidi ဟာ ဂြာမနီနိုငျငံသူတဈယောကျဖွဈပွီး ဝငျငှဒေျေါလာ သနျး ၁၆၀ အထိ ရရှိနပေါတယျ။
၁၅။ Gisele Bundchen
စူပါမျောဒယျ Gisele ဟာ မျောဒယျရှိုးလြှောကျရာကနေ ၂၀၁၅ ခုနှဈကတညျးက အနားယူခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဝငျငှဒေျေါလာ သနျး ၄၀၀ အထိ ရရှိနသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။
ကမ္ဘာကျော် စူပါမော်ဒယ်တွေရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများ။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တွေဟာ ကြော်ငြာပိုစတာမျာရိုက်ကူးခြင်း၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများ ကြော်ငြာပေးခြင်းနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ Brand Ambassador တွေအဖြစ် ရပ်တည်ကာ ဝင်ငွေများ ရရှိနေကြပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီး Soshwe ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တစ်ချို့ရဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Gigi ကတော့ Victoria Secret မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ Net Worth မှာ ဒေါ်လာ ၂၉ သန်းအထိ ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းက ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီး အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးသူတစ်ယောက်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဝင်ငွေပမဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Adidas ၊ Express နဲ့ Swarovski Brand တို့ရဲ့ ပင်တိုင်မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ Net Worth မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ အထိ ရှိပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံသူမော်ဒယ် Linda ဟာ ၁၉၈၀ နဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဝင်ငွေ ၂၅ သန်းအထိ ရရှိတဲ့အထိ အထင်ကြီးဖို့ကောင်းလောက်အောင် ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Vogue Magazine တွင် Linda မှ “ စူပါမော်ဒယ်တွေဆိုတာ အနည်းဆုံး တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ မှမရရင် အလုပ်မလုပ်ဘူး . . . ” ဆိုပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စူပါမော်ဒယ်လည်းဖြစ်သလို အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Chrissy မှ သူမရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှ ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၇၅ သန်းအထိ ရရှိနေပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှစတင်ပြီးတော့ Levi ကြော်ငြာကနေ သူမရဲ့ မော်ဒယ်ဘဝကို စတင်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်သူ Rosie ဟာ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ကျော်အထိ ရရှိ်ိနေပါတယ်။
Victoria Secret ရဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်သူ Doutzen Kroes မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိတဲ့ မော်ဒယ်တွေရဲ့ နံပါတ် (၁၀) နေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ဝင်ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းအထိ ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ငွေကြေးအမြောက်အမြားပေးရတဲ့ အာရှမှ စူပါမော်ဒယ်အဖြစ် Forbes Magazine မှ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ဝင်ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၇ သန်းအထိ ရှိပါတယ်။
Snapchat ကို တည်ထောင်သူ Evan Spiegel ကို လက်ထပ်ထားတဲ့ Miranda Kerr ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ အထိ ဝင်ငွေရှိပါတယ်။
ဘရာဇီးအလှမယ်ဖြစ်သူ Alessandra Ambrosio ဟာ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းက မော်ဒယ်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ဝင်ငွေမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ အထိ ရှိပါတယ်။
“ Keeping Up With the Kardashians ” အစီအစဉ်ရဲ့ စတားတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Kendall Jenner မှာ Kardashians မိသားစုထဲတွင် စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းအထိ ဝင်ငွေရရှိနေပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက Victoria Secret မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လာတဲ့ Adriana ဟာ ဒေါ်လာ ၉၅ သန်းအထိ ဝင်ငွေရရှိနေပါတယ်။
Gucci ၊ Kelvin Klein ၊ Chanel နဲ့ Bvlgari တို့ရဲ့ ပင်တိုင်မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kate Moss ဟာ ဝင်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၇၀ ကျော် ရရှိနေတဲ့ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ချင်ပါသလား ? ? ? “ The America Next Top Model ” ကို စတင်တည်ထောင်သူနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် စူပါမော်ဒယ် Tyra Banks ဟာ သူမရဲ့ အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးကနေ ဝင်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၉၀ ကျော် ရရှိနေပါတယ်။
“ American Got Talent ” အစီအစဉ်ရဲ့ စီစဉ်တင်ဆက်သူလည်းဖြစ်သလို စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Heidi ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၁၆၀ အထိ ရရှိနေပါတယ်။
စူပါမော်ဒယ် Gisele ဟာ မော်ဒယ်ရှိုးလျှောက်ရာကနေ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက အနားယူခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဝင်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ အထိ ရရှိနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
Previous အခွားနိုငျငံမြားသို့ သှားရောကျလညျပတျတဲ့အခါမြိုးတှမှော ရှောငျရှားသငျ့သောအခကျြမြား။
Next နညျးပွကွီး Alex Ferguson အနနေဲ့ Cristiano Ronaldo ကို ယူနျိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ မရှေးခယျြခဲ့ရခွငျး အကွောငျးအရငျး။